7 inch Led Headlight oo loogu talagalay Royal Enfield Projector Headlight
Iftiinka hore ee 'Royal Enfield' wuxuu la socdaa dogob sare, dogob hoose, DRL cad iyo calaamadaha leexinta dhalada. Waxay ku habboon tahay mootooyinka Royal Enfield oo ku qalabaysan 7 nalka hore ee inji.
Our 7 inch ayaa hogaamisay nalka hore ee mootada Royal enfield wuxuu la yimaadaa 6000K heerkul midab leh oo u xira qoraxda dabiiciga si loo hagaajiyo hufnaanta aragtida wadista iyo nncrease raaxada wadista. Wanaagsan waxqabadka biyaha iyo boodhka oo aan fiicnayn. Kiiska guriyeynta waara oo leh kuleylka kuleylka waxqabadka wanaagsan. Cufnaanta sare ee tamarta iyo iftiinka iftiinka si loo ballaariyo qadka aragtida, waxay kuu siyaadinaysaa xaalado waditaan aamin ah. Our Royal Enfield waxay leeyihiin adeegsi hooseeya, hufan, keydinta tamarta iyo astaamaha ilaalinta deegaanka. Waqtiga jawaabta / deminta korontada oo sarreysa, Nolol adeeg dheer ah in kabadan 50000 saacadood. Bareeso oo ciyaar, rakibidda fudud, badanaa waxay kugu kacdaa qiyaastii 15 daqiiqo rakibidda. Waxay ku habboon tahay mootooyinka Royal Enfield oo leh nalka hore ee 7 inji oo inji ah.
Faahfaahinta 7 Iftiin hoggaamiye Led ah oo loogu talagalay Royal Enfield
Number Model MS-7080D
aragti 7inch ayaa keentay nalka hore ee gaariga
Giraanta Halo White drl oo leh calaamadda jeegga cad / cambaarta
Faa'iidooyinka Nalka hore ee Mashruuca Royal Enfield